အဆိုပါ prefrontal cortex အတွက် Norepinephrine amphetamine- သွေးဆောင်ဆုလာဘ်နှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန် mesoaccumbens များအတွက်အရေးပါသည်။ (2003) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
အဆိုပါ prefrontal cortex အတွက် Norepinephrine စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ဆုလာဘ်များနှင့် mesoaccumbens dopamine လွှတ်ပေးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ (2003)
comments: Norepinephrine (Noradrenaline) ဤသို့သောထိတ်လန်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းများအဖြစ်ထုတ်လုပ်တုန်လှုပ်ဖွယ်သို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ရပ်များ, စဉ်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်အကျိုးကို circuitry လှုံ့ဆော်သောကွောငျ့အသုံးပြုသူများ (ထိုသူတို့အား) ပိုပြီးထိတ်လန်သို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်ပစ္စည်းဆီသို့ gravitate လိမ့်မည်။
J ကို neuroscience ။ 2003 Mar 1;23(5):1879-85.
Ventura R ကို1, Cabib S က, Alcaro တစ်ဦးက, Orsini ကို C, Puglisi-Allegra S က.
စွဲလမ်းစေယန္တရားများအတွက် cortical ဒေသများ၏အဓိကပါဝင်ပတ်သက်မှုမှသက်သေအထောက်အထားများရမှတ်တိုးမြှင့်။ ဒီ psychostimulant ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုရှိ၎င်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိပေမယ့်အဆိုပါ medial prefrontal cortex (mpFC) တွင် Noradrenergic ဂီယာ, စိတ်ကြွဆေး၏မော်တာသက်ရောက်မှုကိုထိခိုက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်စမ်းသပ်ချက်စိတ်ကြွဆေး၏အကျိုး-အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများအတွက် prefrontal cortical norepinephrine (NE) ၏ရွေးချယ်ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေစုံစမ်းစစ်ဆေးရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကျနော်တို့ C57BL / 6J inbred strain ၏ကြွက်တွေအတွက်လေ့ယင်း psychostimulant ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှအလွန်အမင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်လူသိများကြောင်းမော်လီကျူးချဉ်းကပ်မှုများတွင်အသုံးပြုနေတဲ့နောက်ခံ mpFC NE ရွေးချယ်ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။ စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုပထမဦးဆုံးအစုတှငျကြှနျုပျတို့ prefrontal NE လျော့ကျဆောင်သောကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို၏မရှိခြင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ချက်များတစ်စက္ကန့်စီးရီးမှာတော့ကျနော်တို့ intracerebral microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာကဲ့သို့တူညီသောတွေ့ရှိရပါသည်သိသိသာသာစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် mesoaccumbens dopamine လွှတ်ပေးရန်လျှော့ချကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။
ဤရလဒ်သည်ကြောင်း noradrenergic prefrontal ဂီယာညွှန်ပြခြင်း, နျူကလိယတိုးမြှင် dopamine လွှတ်ပေးရန်စိတ်ကြွဆေးများကသွေးဆောင် accumbens ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်, ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုး-အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများအတွက်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကွဲပြားခြားနားသောအတန်းပိုင်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး, အနျူကလိယ accumbens အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောမူလတန်းမော်လီကျူးပစ်မှတ်ရှိခြင်းဖြစ်သော်လည်းအားလုံး dopamine တိုးမြှင့် (DA) ဂီယာ (NAc) (di Chiara နှင့် Imperato, 1988; ပညာရှိ Rompre, 1989; Weiss et al ။ , 1992; Pontieri et al ။ , 1995; Koob et al ။ , 1998; Robbins နှင့် Everitt, 1999) ။ (အပြင်, အားဖြည့်-ကြိုးများနှင့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးမော်တာ-ကိုသက်ဝင်သက်ရောက်မှုများ NAc အတွင်းတိုးမြှင့် DA လွှတ်ပေးရေးအပေါ်မူတည်မှထင်နေကြသည်နှစ်ဦးစလုံးပညာရှိ Rompre, 1989; di Chiara, 1995; Koob et al ။ , 1998).
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အမူအကျင့်နှင့်ဗဟိုဆိုးကျိုးများအတွက်ဦးနှောက် norepinephrine (NE) ၏အဓိကပါဝင်ပတ်သက်မှု၏တိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့ (norepinephrine Transporter ချို့တဲ့ကြွက် psychostimulants မှအပြုအမူ hypersensitive ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီးXu et al ။ , 2000) ။ ဆနျ့ကငျြ, α1b-adrenergic receptors ချို့တဲ့ကြွက် (psychostimulants နှင့် opioids များ၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုမှ hyposensitive များမှာDrouin et al ။ , 2002b) နှင့် accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ်စိတ်ကြွဆေးများတိုးမြှင့်သက်ရောက်မှု (Amph) မှ (Auclair et al ။ , 2002) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, prazosin တစ်ခုα1-adrenergic ရန်, အ prefrontal cortex သို့ဖြစ်စေ system သို့မဟုတ်ဒေသအလိုက်ထိုး, (ဃ-စိတ်ကြွဆေးများကသွေးဆောင်အဆိုပါ locomotor hyperactivity လျှော့ချရန်ပြသခဲ့သည်Snoddy နှင့် Tessel, 1985; Dickinson et al ။ , 1988; blanc et al ။ , 1994; Darracq et al ။ , 1998) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လွတ်လပ်သောလေ့လာမှုများ (စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် mesoaccumbens DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်α1-adrenoreceptors များအတွက်အခန်းကဏ္ဍကိုထောကျပံ့ပန် et al ။ , 1996; Darracq et al ။ , 1998; ရှီ et al ။ , 2000).
cortical NE သည်ဤဆိုးကျိုးများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍရှိပေလိမ့်မည်။ အမှန်စင်စစ် noradrenergic စီမံချက်များဦးနှောက် cortex များကို ဖြတ်. နေကြပြီး, NE ပြင်းအားဟာ medial prefrontal cortex (mpFC) တွင်လည်း DA သူတို့ကျော်လွန်။ ထိုမှတပါး, သက်သေအထောက်အထား၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ် (mpFC ကြွက်များတွင်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးနှင့်မော်တာ-လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှု၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအကြံပြုCarter ကနှင့် Pycock, 1980 ; Bubser နှင့် Schmidt က, 1990; Tzschentke နှင့် Schmidt က, 1998a,b) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့စွဲလမ်းယန္တရားများအတွက် cortical ဒေသများ၏အဓိကပါဝင်ပတ်သက်မှု၏တိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်လူသားများတွင်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ orbitofrontal cortex, အ prefrontal cortex တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဧရိယာအားဖြည့်အပြုအမူတွေ, အေးစက်တုံ့ပြန်မှုများနှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ပုံစံများ (များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအကြံပြုVolkow နှင့်မုဆိုး, 2000).
ဖက်တမင်းဆေးပြားအစွမ်းထက် locomotor လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်နှင့် (conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) ဖြင့်တိုင်းတာကဲ့သို့ခိုင်မာသောအားဖြည့်-ဆုချီးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်တဲ့အလွန်အမင်းစွဲလမ်း psychostimulant ဖြစ်ပါသည်Vezina, 1993; Cabib et al ။ , 2000; Robinson နဲ့ Berridge, 2001) ။ အဆိုပါ psychostimulant လွှတ်ပေး ( ပို. အစွမ်းထက် DA ထက် neKuczenski နှင့် Segal, 1997; Rothman et al ။ , 2001) ။ သို့သော်မကြာသေးမီအစီရင်ခံစာများနံပါတ် (Amph-သွေးဆောင် hyperlocomotion နှင့် mesoaccumbens DA လွှတ်ပေးရန်အတွက် mpFC NE တစ်ခုပါဝင်ပတ်သက်မှုညွှန်ပြပေမယ့်blanc et al ။ , 1994;Darracq et al ။ , 1998), ဒီ psychostimulant ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုအတွက် mpFC NE ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမဒေတာရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့သည်လေ့အဆိုပါလှုံ့ဆော်-ဆုချီးဖို့အလွန်အမင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်လူသိများကြောင်းမော်လီကျူးချဉ်းကပ်မှုများတွင်အသုံးပြုနေတဲ့နောက်ခံအဆိုပါ C57BL / 6J inbred strain ၏ကြွက်တွေအတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်စိတ်ကြွဆေး၏အကျိုး-အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများအပေါ် mpFC ရွေးချယ် NE ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏သက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး စိတ်ကြွဆေး၏ဆိုးကျိုးများ (Puglisi-Allegra နှင့် Cabib, 1997; Cabib et al ။ , 2000) ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ Amph-သွေးဆောင် mesoaccumbens DA လွှတ်ပေးရေးအပေါ် prefrontal NE ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။ အမှန်စင်စစ်စိတ်ကြွဆေးများကသွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအတွက် mesoaccumbens DA လွှတ်ပေးရန်၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချသက်သေအထောက်အထား (ရှိCarr ကများနှင့်ဖြူ, 1986;Olmstead နှင့် Franklin, 1996; Schildein et al ။ , 1998).
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ inbred C57BL / 6JIco (C57) မျိုး (ချားလ်စ်မြစ်, Calco, အီတလီ) ၏အထီးကြွက်, စမ်းသပ်ချက်၏ထိုအချိန်ကဟောင်း 8-9 ရက်သတ္တပတ်, (သျောခဲ့ကြသည်Ventura et al ။ , 2001) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စု 5-12 တိရစ္ဆာန်များ၏ပါဝင်သည်။ အားလုံးစမ်းသပ်ချက်သုတေသနအတွက်တိရစ္ဆာန်များ၏အသုံးပြုမှုအပေါ်အီတလီအမျိုးသားရေးဥပဒေ (DLM ။ 116 / 92) အရကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
D-ဖက်တမင်းဆေးပြား sulfate, chloral ဓါတ်ကိုပြန်လည်, 6-hydroxydopamine (6-OHDA), နှင့် GBR 12909 (GBR) Sigma (မီလန်, အီတလီ) မှဝယ်ယူခဲ့သည်။ Amph (2.5 / ကီလိုဂရမ် mg), chloral ဓါတ်ကိုပြန်လည် (450 / ကီလိုဂရမ် mg), နှင့် GBR (15 mg / kg) ဆား (0.9% NaCl) အတွက်ဖျက်သိမ်းနှင့် 10 ml / ကီလိုဂရမ်တစ် volume ထဲမှာ intraperitoneally ထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ 6-OHDA Na-metabisulphite (0.1m) ပါဝင်တဲ့ဆားအတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။
အမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက် (CPP ကယန္တရားကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့ကြCabib et al ။ , 1996, 2000) ။ အဆိုပါယန္တရားနှစ်ခုကိုမီးခိုးရောင် Plexiglas အခန်းများ (15 × 15 × 20 စင်တီမီတာ) ဖွဲ့စည်းကာဗဟိုလမ်းကြား (15 ×5× 20 စင်တီမီတာ) ။ နှစ်ဦးကလျှောတံခါးများ (4 စင်တီမီတာ× 4) အခန်းဖို့လမ်းကြားချိတ်ဆက်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းနှစ်ခုတြိဂံ parallelepipeds (5 ×5× 20 စင်တီမီတာ) အနက်ရောင် Plexiglas ထားနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ (အမြဲအခနျး၏တူညီသောမျက်နှာပြင်ကိုဖုံးအုပ်ထား) မှာစီစဉ်ပေးအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ နေရာအရပ်အေးစက်များအတွက်လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကယခင်ကဖော်ပြထားခဲ့သည် Cabib et al ။ (1996, 2000) ။ အတိုချုပ်နေ့က0(pretest) ရက်နေ့မှာကြွက် 15 မိဘို့တစ်ခုလုံးကိုယန္တရားစူးစမ်းဖို့လွတ်ကြ၏။ အောက်ပါ9ဃ (အေးစက်အဆင့်) စဉ်အတွင်းကြွက်နှစ်ခုအခန်းများ၏တဦးတည်းအတွက်တနည်း 40 မိဘို့နေ့စဉ်သွားလာခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်အဘို့, အေးစက်အဆင့်စဉ်အတွင်းယင်းပုံစံများကိုတစ်ဦးတစ်သမတ်တည်းဆားနှင့်ဆားသို့မဟုတ် Amph (2.5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) တစ်ခုခုကိုနှင့်အတူအခြားတဦးတည်းနှင့်အတူတွဲခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကွန်မြူနစ်ဝါဒဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းခဲ့ကြသည်, တစ်ခုချင်းစီစမ်းသပ်အုပ်စုတထက်ဝက်အဘို့, Amph အခြားတဦးတည်းသူတို့နှင့်အတူ၏ပုံစံများနှင့်တတစ်ဝက်နှင့်အတူတွဲခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် pretest လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဘို့အဖြစ်တစ်ရက် 10 အပေါ်ကောက်ယူခဲ့သည်။
အမူအကျင့်ဒေတာ ( "EthoVision" ကစုဆောင်းလေ့လာခဲ့ကြNoldus သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ, Wageningen, အဆိုပါနယ်သာလန်), အပြည့်အဝ automated ဗီဒီယိုကိုခြေရာခံစနစ် (Spink et al ။ , 2001) ။ အတိုချုပ်တစ်ဦး CCD ဗီဒီယိုကင်မရာစမ်းသပ်စနစ်ကမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အဆိုပါအချက်ပြပြီးတော့ digitized (ကဘောင် Grabber လို့ချေါတဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ device ကိုအားဖြင့်) နှင့်ကွန်ပျူတာ၏မှတ်ဉာဏ်မှအပေါ်လွန်နေသည်။ နောက်ပိုင်းပေါ်, ဒစ်ဂျစ်တယ် data တွေကိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် preference ကိုရမှတ်များအတွက်ကုန်ကြမ်းဒေတာအဖြစ်အသုံးပြု (စက္ကန့်အတွင်း) "ကုန်အချိန်" ရွေ့လျား၏အတိုင်းအတာအဖြစ်အသုံးပြု, (မီလီမီတာအတွက်) "အကွာအဝေးသို့ပြောင်းရွှေ့" နှင့်ရယူဖို့ EthoVision ဆော့ဖ်ဝဲအားဖွငျ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြသည် တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်အားဖြင့်ယန္တရား၏လုပ်ငန်းကဏ္ဍ။
တိရစ္ဆာန်များ, chloral ဓါတ်ကိုပြန်လည်နှင့်အတူ anesthetized တစ် stereotaxic ဘောင် (ဒါဝိဒ်သည် Kopf တူရိယာ, Tujunga,, CA) တွင်တပ်ဆင်ထားမောက် adapter နဲ့တပ်ဆင်ထားနှင့်လမ်းညွှန် cannula (သံမဏိနှင့်အတူတဖက်သတ်ထဲထညျ့ကြသည် ဟူ. ၎င်း, ရိုးအပြင်ဘက်အချင်း, 0.38 မီလီမီတာ; Metal, စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင် ,) ကို mpFC အတွက်ဒါမှမဟုတ် NAc ၌တည်၏။ လမ်းညွှန် cannula ၏အရှည် 1 NAc များအတွက် mpFC နှင့် 4.5 မီလီမီတာအဘို့အမီလီမီတာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလမ်းညွှန် cannula epoxy ကော်အတူ fixed ခဲ့ပါတယ်နှင့်ပါးစပ်တွင်းဘိလပ်မြေအပိုဆောင်းတည်ငြိမ်ဘို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ bregma ထံမှသြဒီနိတ် [၏ Atlas သည်နှင့်အညီတိုင်းတာ Franklin နှင့် Paxinos (1998)] (မီလီမီတာအတွက်) အောက်ပါအတိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏: + 2.52 anteroposterior နှင့် 0.6 mpFC များအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်; အများအားဖြင့် shell ကို subdivision အပါအဝင် NAc [(အဘို့နှင့် + 1.60 anteroposterior နှင့် 0.6 နှစ်ဦးနှစ်ဖက်Franklin နှင့် Paxinos, 1998)] ။ အဆိုပါအာကာသယာဉ် (Dialysis အမြှေးပါးအရှည်, mpFC နှင့် NAc များအတွက်2မီလီမီတာအဘို့အ 1 မီလီမီတာ; 0.24 မီလီမီတာ၏အပြင်ဘက်အချင်း; MAB4cuprophane microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေး; metal) ကိုလမ်းညွှန် cannula ၏ implantation ပြီးနောက် 24 နာရီစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များပေါ့ပေါ့လမ်းညွှန် cannula သို့ microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေး၏လက်စွဲသွင်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန် anesthetized ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအမြှေးပါးအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြ စသည်တို့အတွက် ပြန်လည်နာလန်ထူအတည်ပြုရန်အသုံးပြုမှုကိုရှေ့တော်၌ထိုနေ့၌ DA နှင့် NE ၏ပြန်လည်နာလန်ထူ။
Instech Laboratories, Plymouth အစည်းအဝေး, အဆိုပါ microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေး polyethelene-100 Tube နှင့်တစ်ဦး Ultra-အနိမ့် torque Dual-ရုပ်သံလိုင်းအရည်ဆုံလည် (မော်ဒယ် 20 / D ကို / 375QM မှတဆင့်တစ်ဦး CMA / 22 စုပ်စက် (ဂျီဆေးပညာ, စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်), ချိတ်ဆက်ထားပြီးခဲ့သည် PA ဆိုပြီး) အခမဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုခွင့်ပြုပါရန်။ မီလီမီတာအတွက်အတု CSF (147 NaCl, 2.2 CaCl2နှင့်4KCl) (Pontieri et al ။ , 1995)2μl / မိနစ်တစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းမှုနှုန်းကိုမှာ Dialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးမှတဆင့် pumped ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ချက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေရာချထားပြီးနောက် 22-24 နာရီဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန် microdialysis ပစ္စည်းကိရိယာများ (Instech Laboratories) နှင့်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအိမ်ကလှောင်အိမ်အိပ်ယာနှင့်အတူပေးအပ်နေတဲ့မြို့ပတ်ရထားလှောင်အိမ်ထဲမှာထည့်ထားခဲ့ပါတယ်။ Dialysis perfusion အကြာတွင် 1 နာရီစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Dialysis perfusion ရဲ့ start ပြီးနောက်ကြွက်အခြေခံနမူနာစုဆောင်းခြင်းမပြုမီ ~2 နာရီများအတွက်ဘေးလွတ်သော left ခဲ့ကြသည်။ Dialysate 20 မိသည် 180 မိကောက်ယူခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုမပြုမီသုံးအခြေခံနမူနာကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နေရာချ cannula နှင့်အတူကြွက်တွေကနေမှသာလျှင် data တွေကိုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ နေရာချထားမှုကို methylene အပြာရောင်အစွန်းအထင်းများကတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏။ ပုံထဲမှာ 1 အဆိုပါ mpFC နှင့် NAc အတွက် microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေး၏တည်နေရာကိုကိုယ်စားပြုသည်။ HPLC မှ dialysate နမူနာနှစ်ဆယ် microliters ကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျန်ရှိသော 20 μlဖြစ်နိုင်သမျှနောက်ဆက်တွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့သိုထားခဲ့ကြသည်။ ပြင်းအား (pg / 20 μl) စုံစမ်းစစ်ဆေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်တညျ့မခံခဲ့ရပါ။ ကုသမှုမတိုင်မီချက်ချင်းကောက်ယူခဲ့သောနမူနာသုံးမျိုး၏ပျမ်းမျှအာရုံစူးစိုက်မှု (<10% variation) ကို basal concentration အဖြစ်ယူသည်။
အဆိုပါ medial prefrontal cortex အတွက် microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်နျူကလိယ accumbens ၏တည်နေရာ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးပုဒ်၏ silhouette mouse ကိုဦးနှောက်နှင့် implantation က်ဘ်ဆိုက်များ၏အကွာအဝေး၏ကိုယ်စားလှယ်ကဏ္ဍများပေါ်သို့ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ စက်ဝိုင်း တစ်ရှူးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်သည့်ဒေသများကိုယ်စားပြုသည်။ အသေးစိတ်အတွက်ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများကြည့်ပါ။ အဆိုပါ ဂဏန်း အညီ bregma မှမီလီမီတာ rostral ညွှန်ပြ Franklin နှင့် Paxinos (1998).
တစ်ဦးအေးစက်ဆဲလ် (M 5200) နှင့်တစ်ဦးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆဲလ် (M 5021) နဲ့ထောက်ပံ့; အဆိုပါ HPLC စနစ်ကတစ်ဦးမဟာမိတ်အဖွဲ့ (ရေကော်ပိုရေးရှင်း, Milford, MA) စနစ်နှင့်တစ်ဦး coulometric detector (ESA, Chelmsford, MA မော်ဒယ် 5011A Coulochem II ကို) ၏ပါဝင်သည်။ အဆိုပါအေးစက်ဆဲလ် 400 MV, 1 MV မှာလျှပ်ကူးပစ္စည်း 200 နှင့် -2 MV မှာလျှပ်ကူးပစ္စည်း 250 မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ တစ်ဦးက Nova-Pack ကို C18 ကော်လံ (3.9 × 150 မီလီမီတာ; ရေကော်ပိုရေးရှင်း) အသုံးပြုခဲ့သည် 33 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစီးဆင်းမှုနှုန်းကို 1.1 ml / မိနစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့မိုဘိုင်းအဆင့် (ခဲ့သည်Westerink et al ။ , 1998) ။ အဆိုပါ assay ၏ထောက်လှမ်းန့်သတ်ချက် 0.1 pg ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ mpFC အတွက် NE လျော့ကျ
မေ့ဆေးနှင့်ခွဲစိတ်ထားရှေ့အပိုဒ်များတွင်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ တိရစ္ဆာန်များ dopaminergic အာရုံခံကာကွယ်ပေးရန် 15-OHDA microinjection မတိုင်မီ GBR (30 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်)6မိနှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် +6anteroposterior, ± 1.5; 0.1-OHDA (တစ်ဦးချင်းစီအခြမ်းဘို့2μg / 2.52 μl / 0.6 မိ) ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်ဆေးထိုးခြင်း, mpFC [သြဒီနိတ်သို့ခဲ့ -2.0 ventral bregma မှလေးစားမှုနှင့်အတူ (Franklin နှင့် Paxinos, 1998)], တစ်ဦးသံမဏိ cannula (0.15 မီလီမီတာပြင်အချင်းမှတဆင့်; UIMED, Lausanne, ဆွစ်ဇာလန်), တစ်ဦး polyethylene ပြွန်က 1 μlပြွတ်နဲ့ချိတ်ဆက်ကာ CMA / 100 စုပ်စက်တို့ကမောင်းနှင်။ အဆိုပါ cannula အဆိုပါပြုတ်ရည်၏အဆုံးအပြီးတစ်ဦးအပိုဆောင်း2မိဘို့ရာအရပျ၌ကနျြခဲ့သညျ။ အတုအယောင်တိရိစ္ဆာန်များ (အတုအယောင်) တူညီသောကုသမှုအကြောင်းမဲ့ပေမယ် intracerebral မော်တော်ယာဉ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်များခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် microdialysis သို့မဟုတ်အပြုအမူစမ်းသပ်ချက်7ဃများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ mpFC ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ် NAc အတွက် NE နှင့် DA တစ်ရှူးအဆင့်ဆင့် (အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်Ventura et al ။ , 2001) ပမာဏနှင့်ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏အတိုင်းအတာအကဲဖြတ်ဖို့။ ဦးနှောက်တစ်ခဲ microtome ၏အေးခဲပန်းကန်ပေါ်ဒေါင်လိုက် fixed ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံး hemisphere ၏လာကြတယ် 300 μmထက်မပိုထူဦးနှောက်အချပ် (Coronal ကဏ္ဍများ) မှရရှိသောခဲ့ကြသည်။ 0.8 (NAc) သို့မဟုတ် 2.3 မီလီမီတာ (mpFC) အတွင်းအချင်း၏သံမဏိပြွန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါသြဒီနိတ်၏ Atlas သည်နှင့်အညီတိုင်းတာခဲ့ကြသည် Franklin နှင့် Paxinos (1998) ; mpFC, 2.96 မှ 2.34 ကနေနှစ်ခုချပ်: (bregma ထံမှမီလီမီတာအဖြစ် Coronal အပိုင်း) ကိုအောက်ပါအတိုင်း NAc, 1.70 မှ 0.98 ကနေသုံးချပ်။ ပုံထဲမှာ 1 Localization အတွက်ရှုပ်နေခဲ့သည်ကိုယ်စားပြုနေသည်။ အဆိုပါလာကြတယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနေ့တိုင်အောင်အရည်နိုက်ထရိုဂျင်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ခဲ့ကြသည်။
DA နှင့် NE Coulochem လြှပျစစျထောက်လှမ်းနှင့်အတူဒွန်တွဲနေတဲ့ပြောင်းပြန်-အဆင့် HPLC လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသုံးပြီးတစ်ပြိုင်နက်ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏နေ့တွင်, အေးစက်နေတဲ့နမူနာ 0.1N HClO အတွက်အလေးချိန်နှင့် homogenized ခဲ့ကြသည်46mmNa-metabisulphite နှင့် 1 မီလီမီတာ EDTA ်။ အဆိုပါတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း 10,000 ×မှာ centrifuged ခဲ့ကြသည် g 20 မိဘို့4မှာကို C °။ အဆိုပါ supernatant ၏ Aliquots အဆိုပါ HPLC system ကိုပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါ HPLC စနစ်ကအသီးသီးအတွက်အလားအလာဟာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အေးစက်ဆဲလ်မှာ + 450 နှင့် + 100 MV မှာသတ်မှတ်ထားခံရအတူရှေ့အပိုဒ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ခဲ့သည်။ ကော်လံတစ်ခု Nova-Pack ကို phenyl ကော်လံ (3.9 × 150 မီလီမီတာ) နှင့်တစ်ဦးကင်းစောင့်တပ်ဖွဲ့ Nova-Pack ကို precolumn (3.9 × 20 မီလီမီတာ) ရေ Corporation မှဝယ်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါစီးဆင်းမှုနှုန်းကို 1 ml / မိနစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမိုဘိုင်းအဆင့်3ကြသည်-ဖော့စဖိတ်ကြားခံ, သော pH 0.1,3မီလီမီတာ Na0.1 EDTA နှင့်2မီလီမီတာ 0.5-ကထုတ်တဲ့ sulfonic အက်ဆစ် Na ဆား (Aldrich, Milwaukee, WI) တွင် 1% Methanol ပါဝင်သည်။
NE ကွယ်ပျောက်သွားစေ။ ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (နှစ်ခုအဆင့်ဆင့်: Sham နှင့် NE ကုန်ခမ်း) မှာအောက်ပါအတိုင်းအဖြစ် mpFC နှင့် NAc အတွက် DA နှင့် NE ၏တစ်ရှူးအဆင့်ဆင့်အပေါ် prefrontal NE ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏သက်ရောက်မှုအချက်များနှင့်အတူ, Two-လမ်း ANOVA အားဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြသည် ဟူ. ၎င်း, နှင့်စမ်းသပ်မှု (သုံးအဆငျ့: အမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုသည် NAc အတွက် microdialysis, နှင့် mpFC အတွက် microdialysis) (n = 85) ။ သင့်လျော်သောအားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည့်အခါတစ်ဦးချင်းအကြား-အုပ်စုကိုနှိုင်းယှဉ်, post ကို hoc စမ်းသပ်မှု (Duncan ကရဲ့မျိုးစုံအကွာအဝေးစမ်းသပ်) ။
အေးစက်သောအရပ် preference ကို။ CPP ကစမ်းသပ်ချက်အဘို့, စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဟာ Amph (အတူတွဲ) တွင်သုံးစွဲအချိန်နှင့်ဆား-တွဲ (Unpaired) အခန်းစမ်းသပ်မှုနေ့၌အနုတ်အဆိုပါ pretest session တစ်ခုပေါ်တွင်အတူတူအခန်းများတွင်သုံးစွဲအချိန်ကိုတွက်ချက်ခြင်းဖြင့်အကဲဖြတ် preference ကိုရမှတ်များပေါ်တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးအခန်းနှင့်အတူဆားတွဲဖက်မှုလက်ခံရရှိတိရိစ္ဆာန်များ၏ဖြစ်ရပ်မှာအတူတွဲအခန်းပေးသောသူတို့ထိတွေ့ခဲ့သည်မှပထမဦးဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ CPP ကစမ်းသပ်ချက်အနေဖြင့်ဒေတာများ (n saline- နှင့် Amph-ကုသကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအ pair နဲ့ Unpaired): Sham နှင့် NE ကုန်ခမ်း) နှင့်အချက်အတွင်းတဦးတည်း (တွဲဖက်မှုနှစ်ခုအဆင့်ဆင့်: = 23) အချက်အကြားတစျဦး (ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှစ်ခုအဆင့်ဆင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVA သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ , ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (နှစ်ခုအဆင့်ဆင့်: ကုန်ခမ်း Sham နှင့် NE), နှင့်နေ့ရက်ကို [နှစ်ခုအဆင့်ဆင့်: ပထမဦးဆုံးနေ့က (ပထမတွဲဖက်မှု) နှင့်နောက်ဆုံးသောနေ့၌: Locomotor လှုပ်ရှားမှုအချက်များကုသမှု (ဆားနှင့် Amph နှစ်ခုအဆင့်ဆင့်) ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူသုံးလမ်း ANOVA အားဖြင့်ဆန်းစစ်ခဲ့သည် (နောက်ဆုံးတွဲဖက်မှု)] ။ ရိုးရှင်းသောသက်ရောက်မှုတလမ်း ANOVA အားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
Microdialysis ။ စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကုန်ကြမ်းဒေတာ (ပြင်းအား, pg / 20 μl) ရက်နေ့တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ နှင့်အချက်အတွင်းတဦးတည်း (မိနစ်, ခုနစျပါးအဆင့်ဆင့်: 0, 20, 40, 60: အဆိုပါ mpFC အတွက် extracellular NE အဆင့်ဆင့်အပေါ် Amph ၏သက်ရောက်မှုထပ်ခါတလဲလဲ-အတိုင်းအတာအချက်အကြားတစ်ဦးနှင့်အတူ ANOVA (ဆားနှင့် Amph ကုသမှုနှစ်ခုအဆင့်ဆင့်) ကသုံးသပ်ခဲ့ပါသည် 80, 100 နှင့် 120) (n = 18) ။ တိရိစ္ဆာန်များ၏ NAc (ထဲမှာ DA လွှတ်ပေးရေးအပေါ် prefrontal NE ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ဆိုးကျိုးများn Sham နှင့် NE ကုန်ခမ်း) နှင့်အချက်အတွင်းတဦးတည်း (မိနစ်, ခုနစျပါးအဆင့်ဆင့်: 47; နှင့်တွေ့ရှိရပါသည်နှစ်ခုအဆင့်ဆင့်ဆားနှင့် Amph: = Amph နှင့်အတူစိန်ခေါ် 0) အချက်များအကြားနှစ်ဦးကို (ကုသမှုနှစ်ခုအဆင့်ဆင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVA အားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည် , 20, 40, 60, 80, 100 နှင့် 120) ။ တိရိစ္ဆာန်များ၏ mpFC (ထဲမှာ NE နှင့် DA လွှတ်ပေးရေးအပေါ် prefrontal NE ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ဆိုးကျိုးများn Sham နှင့် NE ကုန်ခမ်း) နှင့်အချက်အတွင်းတဦးတည်း (မိနစ်ကိုးအဆငျ့: -15, -40, 20, 0, 20 = Amph နှင့်အတူစိန်ခေါ် 40) အချက်အကြားတစျဦး (ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှစ်ခုအဆင့်ဆင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVA အားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည် , 60, 80, 100 နှင့် 120) ။ ရိုးရှင်းသောသက်ရောက်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်မှတ်ဘို့တလမ်း ANOVA အားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ သင့်လျော်သောအားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည့်အခါတစ်ဦးချင်းအကြား-အုပ်စုကိုနှိုင်းယှဉ်, post ကို hoc စမ်းသပ်မှု (Duncan ကရဲ့မျိုးစုံအကွာအဝေးစမ်းသပ်) ။
အဆိုပါ mpFC အတွက် DA နှင့် NE တစ်ရှူးအဆင့်ဆင့်အပေါ် prefrontal NE ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမျှအရေးပါသောစမ်းသပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်သိသိသာသာကိုတွေ့ရှိရပါသည်သက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည် (F (2,79) = 7.08; p <0.0005) ကိုသာ NE တန်ဖိုးများအတွက်, dopamine အဆင့်ဆင့်သိသိသာသာကွာခြားခဲ့ပါဘူးသော်လည်း။ NAc ရှိ NE သို့မဟုတ် DA တစ်ခုခုအတွက်သိသာထင်ရှားသောစမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ်တွေ့ရှိမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပါ (ဇယား1).
mpFC နှင့်အတုအယောင်များနှင့် NE-ကုန်ခမ်းကြွက်၏ NAc အတွက် (ng / gm စိုစွတ်သောအလေးချိန်) NE နှင့် DA တစ်ရှူးအဆင့်ဆင့်
Amph-သွေးဆောင်ရာအရပျအေးစက်အပေါ် medial prefrontal cortex အတွက် NE ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ဆိုးကျိုးများပုံမှာပြထားတဲ့နေကြတယ်2။ ရလဒ်မသက်ဆိုင်သည့်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အခြေအနေ (Sham သို့မဟုတ် NE ကုန်ခမ်း) (ပုံ၏, နှစ်ဦးစလုံးအခန်းနှင့်အတူဆားတွဲဖက်မှုကြုံတွေ့ခဲ့ကွောငျးတိရိစ္ဆာန်များအားဖြင့်အခန်းတစ်ခုခုကိုမ preference ကိုပြသခဲ့သည်။2A) ။ အဆိုပါ Amph-ကုသအုပ်စုများထံမှတိရိစ္ဆာန်များသည် ANOVA (တွေ့ရှိရပါသည်အပြန်အလှန်×သိသိသာသာတွဲဖက်မှုထင်ရှားF (1,11) = 6.3;p <0.05) ။ အတုအယောင်အုပ်စုတိရိစ္ဆာန်များသည်အမ်ဖာတွဲဖက်ထားသောအခန်းအတွက်သိသိသာသာကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းပြသခဲ့သည် (F (1,12) = 7.6; p <0.05), ဒါပေမယ့် Amph အဆိုပါ NE- ကုန်ခမ်းအုပ်စု (ပုံ။ ) အတွက်မူးယစ်ဆေး - တွဲအခန်းများအတွက်မဆို preference ကိုသွေးဆောင်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။2B).
ဆားများကပြ preference ကိုရမှတ်များပေါ်တွင် prefrontal cortical norepinephrine ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ဆိုးကျိုးများ (အသေးစိတျအဘို့, ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများကိုကြည့်ပါ) (A) နှင့်စိတ်ကြွဆေး (B) conditional ရာအရပျ preference ကိုစမ်းသပ်မှုအတွက်အုပ်စုများ -treated ။ ဒေတာအားလုံးကိုအရှေ့တောင်±ယုတ်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ *p <0.05 ဟာအချို့တဲ့အခန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
Amph-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုများ၏သက်ရောက်မှုပုံမှာပြထားတဲ့နေကြတယ်3။ ANOVA (သိသိသာသာကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြသF (1,38) = 8.58; p <0.01) နှင့်ကုသမှု၏အဓိကသက်ရောက်မှုများ (F (1,38) = 122.2; p <0.0005) နှင့်သိသာသောကုသမှု×နေ့၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု (F (1,38) = 17.7; p <0.0005) ။ ရိုးရှင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများအရ Amph- ကုသသောအုပ်စုများတွင်သာတွေ့ရှိရပါသည်။ Sham နှင့် NE-depleted အုပ်စုများမှ amph ကုသထားသောတိရိစ္ဆာန်များသည်ပထမနေ့မူးယစ်ဆေးဝါးတွဲခြင်းနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကနောက်ဆုံးသောနေ့၌ locomotor လှုပ်ရှားမှုသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အုပ်စုအကြားနှိုင်းယှဉ်ချက်အရ NE- ကုန်ခမ်းထားသည့်ကြွက်များတွင် Amph-induced locomotor သည်ပြီးခဲ့သည့်နေ့ကရှမ်းကြွက်များထက်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။3B).
ဆားများကသွေးဆောင်အဆိုပါ locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ် prefrontal cortical norepinephrine ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ဆိုးကျိုးများ (A) နှင့်စိတ်ကြွဆေး (B) တွဲဖက်မှုအပိုင်း၏ပထမဦးဆုံးနေ့က (ပထမတွဲဖက်မှု) သို့မဟုတ်နောကျဆုံးသောနေ့ (နောက်ဆုံးတွဲဖက်မှု) ပေါ်မှာ။ ဒေတာအားလုံးကိုအရှေ့တောင်±ယုတ်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ *p <0.05 နေ့က 1 # နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါp <0.05 Sham အုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
အဆိုပါ mpFC အတွက် NE လွှတ်ပေးရေးအပေါ် Amph ၏ဆိုးကျိုးများပုံမှာပြထားတဲ့နေကြတယ်4။ စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (ကသိသာထင်ရှားသောကုသမှု×မိနစ်အပြန်အလှန်ထင်ရှားF (1,96) = 9.52; p <0.0005) ။ ရိုးရှင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းက Amph အတွက်မိနစ်များ၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အချိန်နှင့်အမျှဆားနှင့် Amph အကြားသိသိသာသာကွာခြားမှုကိုဖော်ပြသည်။ အင်ဖာသည်ဆေးထိုးပြီးနောက်မိနစ် ၁၂၀ တွင်ဆားငန်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက NE ၌သိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။ ဆေးထိုးပြီးနောက်မိနစ် ၄၀ တွင် ∼120% တိုးလာသည်။ ဆားထိုးသွင်းထားသောကြွက်များတွင်သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
ဆား (လက်ခံရရှိတိရိစ္ဆာန်များ၏ medial prefrontal cortex အတွက် Extracellular norepinephrineဖေါင်) သို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး (2.5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) (amph) ။ ရလဒ်များ Basal တန်ဖိုးများ (1.16 ± 0.12 pg / 20 μl) မှရာခိုင်နှုန်းအပြောင်းအလဲများကို (± SE ကိုဆိုလိုသည်) အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကုန်ကြမ်းအချက်အလက်ပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ *p<0.01 ဆားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
အဆိုပါ NAc အတွက်စနစ်တကျ Amph အားဖြင့်သွေးဆောင် DA လွှတ်ပေးရေးအပေါ် prefrontal NE ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ဆိုးကျိုးများပုံမှာပြထားတဲ့နေကြတယ်5။ စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (တွေ့ရှိရပါသည်×မိနစ်အပြန်အလှန်×သိသိသာသာကုသမှုထင်ရှားF (1,258) = 5.63; p <0.0005) ။ ရိုးရှင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုက Amph အတွက်မိနစ်များ၏သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုနှင့်ဆားနှင့် Amph တို့အကြားသိသာသောခြားနားချက်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ Amph သည်ဆေးကြောပြီးနောက်မိနစ် ၄၀ တွင်အမြင့်ဆုံးပမာဏ (Basal တန်ဖိုး၏ ၃၅၀%) သို့ရောက်ရှိပြီး ၁၀၀ မိနစ်အကြာအပြီးတွင်ဆားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက NAc of Sham ကြွက်များတွင် DA ထုတ်လွှတ်မှုသိသိသာသာတိုးလာခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Amph သည် prefrontal NE - deplet လုပ်ထားသောကြွက်များ၏ NAc တွင် DA ထုတ်လွှတ်မှုကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ Basal DA ထွက်ပေါက်အုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွာခြားခဲ့ပါဘူး။
ဆားကိုလက်ခံရရှိတိရိစ္ဆာန်များ၏နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine အပေါ် prefrontal cortical norepinephrine ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ဆိုးကျိုးများ (ဖေါင်) သို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး (2.5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) (amph) ။ ရလဒ်များ Basal တန်ဖိုးများ (1.30 ± 0.16 pg / 20 μl) မှရာခိုင်နှုန်းအပြောင်းအလဲများကို (± SE ကိုဆိုလိုသည်) အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကုန်ကြမ်းအချက်အလက်ပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ *p <0.01 ဆားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
အဆိုပါ mpFC အတွက်ရွေးချယ် NE လျော့ကျ extracellular NE နှင့် DA ထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ကျနော်တို့ prefrontal cortical Amin ထွက်သွားအပေါ် Amph ၏သက်ရောက်မှုတိုင်းတာ။ အဆိုပါ mpFC အတွက်စနစ်တကျ Amph အားဖြင့်သွေးဆောင် NE နှင့် DA လွှတ်ပေးရေးအပေါ် prefrontal NE ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ဆိုးကျိုးများပုံမှာပြထားတဲ့နေကြတယ်6။ စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (ကသိသိသာသာကိုတွေ့ရှိရပါသည်×မိနစ်အပြန်အလှန်ထင်ရှားF (1,104) = 33.72; pသာ NE များအတွက် <0.0005) ။ ရိုးရှင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုက Sham အုပ်စုအတွက်သာမိနစ်၏သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုနှင့် Amph ဆေးထိုးပြီးနောက်အချိန်ကာလတိုင်းတွင် Sham နှင့် NE - ကုန်ခမ်းအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာခြားနားချက်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှု Sham နှင့် NE - ကုန်ခမ်းတိရိစ္ဆာန်များအကြား Basal extracellular NE အတွက်ထင်ရှားရှိခဲ့သည်။ သို့သော် Amph စိန်ခေါ်ပြီးနောက် NE-deplet cortex တွင်သိသာသောပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။ Basal နှင့် Amph-induced extracellular DA နှစ်ခုလုံးတွင် Sham နှင့် NE-depleted တိရိစ္ဆာန်များအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။
စိတ်ကြွဆေး (2.5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) ကိုလက်ခံရရှိတိရိစ္ဆာန်များ၏ medial prefrontal cortex အတွက် extracellular norepinephrine နှင့် dopamine အပေါ် prefrontal cortical norepinephrine တွေပျက်စီးမှုများ၏သက်ရောက်မှုများ။ *p <0.01 Sham အုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာပထမဦးဆုံးအဓိကတွေ့ရှိချက် CPP ကစနစ်တကျ Amph အားဖြင့်သွေးဆောင်ကြောင်း prefrontal NE လျော့ကျလုပ်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Sham ကြွက်တွေဟာ Amph-တွဲအခန်းများအတွက်သိသာထင်ရှားသော preference ကိုပြသော်လည်းအမှန်မှာ, မရှိ preference ကိုအဆိုပါ NE-ကုန်ခမ်းအုပ်စုတွင်ထင်ရှားခဲ့သည်။ ဘာမှလျှင်, အဆုံးစွန်သောအဖွဲ့ဆား-တွဲအခန်းများအတွက် nonsignificant preference ကိုပြသ။ Amph နှင့်အတူတွဲမအခန်းများအတွက် preference စမ်းသပ်မှုနေ့၌ဒီအခန်းအတွက်သုံးစွဲကာလ၌တစ်ဦးတိုးဖို့ attribute ဖြစ်ပါတယ်။ NE-ကုန်ခမ်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်, ဒီဖြစ်နိုင်သည် (မူးယစ်ဆေး-တွဲအခန်းတစ်ဦးအနည်းငယ်ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုဆိုတာကိုပြသCabib et al ။ , 1996, 2000) ။ Alternative ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်အပြင်, ယာဉ်နှင့်အတူယခင်ကတွဲအဆိုပါအခန်းများတွင်သုံးစွဲကာလ၌အသီးအနှံကို (ဘာလို့လဲဆိုတော့ PFC NE ကွယ်ပျောက်သွားစေခြင်းဖြင့်ရာထူးတိုးမှတ်ဉာဏ်နှောင့်အယှက်၏ဝတ္ထုအဖြစ်ကိုရိပ်မိကာပတ်ဝန်းကျင်၏နှံ့နှံ့စပ်စပ်ရှာဖွေတူးဖော်ရေးညွှန်ပြစေခြင်းငှါ,Kobayashi et al ။ , 2000; Gibbs နှင့် Summers, 2002။ ) ။ Amph (ကကွဲပြားခြားနားတဲ့ဦးနှောက်ဧရိယာအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအားဖြင့် NE-ကုန်ခမ်းကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေး-တွဲအခန်း၏အလွတ်ကျက် facilitated ခဲ့ကြပေမည်Mattay et al ။ , 1996; Hsu et al ။ , 2002) သို့မဟုတ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား neurotransmitter အပေါ် (Castellanos et al ။ , 1996), တစ်ဦးလူသိများနှင့်အနည်းငယ်ဆန္ဒရှိပတ်ဝန်းကျင်၏ရှာဖွေရေးကိုလျှော့ချဖို့စမ်းသပ်မှုနေ့၌ဦးဆောင်။ ဒါကဖြစ်နိုင်ခြေကိုရမ်းအနာဂတ်တိကျသောစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကြောင့်နောက်ထပ် NE-ကုန်ခမ်းအုပ်စုတွင် Amph များ၏အပြုသဘောဆောင်အားဖြည့်သက်ရောက်မှုတစ်ခုရွေးချယ်လျှော့ချရေး၏ဆိုလိုထောက်ခံပါတယ်။ အကြောင်းမူကား, ဤအတောအတွင်းအဆိုပါ locomotor လှုပ်ရှားမှုဒေတာ prefrontal cortical NE လျော့ကျရွေးချယ် Amph များ၏အပြုသဘောဆောင်အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများသက်ရောက်သည်သောအယူအဆမှသွယ်ဝိုက်ထောက်ခံမှုကိုဆက်ကပ်။ အမှန်စင်စစ်အဆိုပါ NE-ကုန်ခမ်းအုပ်စုတွင်တွဲဖက်မှု၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွင် Amph ၏သက်ရောက်မှုကိုနှိုးဆွသည့် locomotor မှအမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသက်သေအထောက်အထားပြ။ ဒါဟာ (ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, မြင် C57 strain ၏ကြွက်အခြေအနေတွင်-မှီခိုာင်းမှအခြေအနေတွင်-လွတ်လပ်သောနှင့်မြင့်မားသောလွယ်ကူစွာထိခိုက်နိုင်မှုအနိမ့်လွယ်ကူစွာထိခိုက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြရပါမည် Puglisi-Allegra နှင့် Cabib, 1997) ကိုမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများနှင့်အတူဆက်စပ်ပေါင်းသင်းနိုင်စွမ်းအပေါ်အလွန်အမင်းမှီခိုသောဖြစ်ရပ်ဆန်း။ ထို့ကြောင့် mpFC NE လျော့ကျ Amph-ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မထားဘူး။
Amph ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ရွေးချယ် NE ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏သက်ရောက်မှုကဒီမှာအစီရင်ခံ Amph-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (အပေါ် excitotoxic PFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်မဆိုသက်ရောက်မှုတစ်ခုမရှိခြင်း၏ယခင်အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူအလေးသာမှာထင်ရှားစေခြင်းငှါTzschentke နှင့် Schmidt က 1998a) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဒီကွာဟမှုဟာ psychostimulant မှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအပေါ် PFC ၏ကွဲပြားခြားနားသောထိန်းသိမ်းရေးအားဖြင့်ရရှိသောပဋိပက္ခဖြစ်ရလဒ်များအမြင်အတွက်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အဖြစ် PFC ၏ ablation Amph မှပိုကောင်း locomotor တုံ့ပြန်မှုမြှင့်တင်ရန်အစီရင်ခံခဲ့ကြပေမယ့် (Whishaw et al ။ , 1992;Dalley et al ။ , 1999; Roffman et al ။ , 2000), အချို့သောသုတေသနအတွက် Amph-သွေးဆောင်ရွေ့လျားအပေါ် PFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်မရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ် (ဘန်း et al ။ , 1993; Tzschentke နှင့် Schmidt က, 1998a) ။ ထိုမှတပါး, excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အမြဲ (cortical aminergic ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏သက်ရောက်မှုမျိုးပွားကြဘူးCollins et al ။ , 1998) ။ ကျနော်တို့ prefrontal NE လျော့ကျ CPP ကပိတ်ဆို့တွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့် Amph အားဖြင့်သွေးဆောင်သည့်မော်တာ-ကိုသက်ဝင်သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို (ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့မှသာညွှန်ပြလေ့လာမှုအတော်များများဟာအလွန်အားနည်းခြင်းသို့မဟုတ်မော်တာလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအကြိုး-အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားမျှဆက်စပ်မှုနှင့်အတူသဘောတူညီချက်၌ရှိကြ၏Tzschentke, 1998) ။ သို့သော်ယခင်လေ့လာမှုများလျှော့ချ NE ဂီယာ (Amph ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ locomotor hyperactivity ကာကွယ်ပေးသည်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့ကြblanc et al ။ , 1994) နှင့်စနစ်တကျ Amph ၏စူးရှသော locomotor အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေ (Drouin et al ။ , 2002a) ။ ထို့အပြင်α1-မျိုးကွဲ adrenergic receptors ချို့တဲ့ကြွက် (ရိုင်း-type အမျိုးအစားထက်နိမ့် Amph-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုပြမှပြသပြီDrouin et al ။ , 2002b).
ဤအယခင်နှင့်လက်ရှိရလဒ်တွေကိုအကြားကွာဟမှုစမ်းသပ်အခြေအနေကွဲပြားမှုအပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်စမ်းသပ်လုပျထုံးလုပျနညျးအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအထူးသ (psychostimulants ၏ locomotor သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ရည်ရွယ်Cabib et al ။ , 2000; Auclair et al ။ , 2002), ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုငုပ်လျှိုးနေတားစီး၏အန္တရာယ်မှရှောင်ရှားရန်, မူးယစ်ဆေးစိန်ခေါ်မှုရှေ့တော်၌ထိုစမ်းသပ်ခြင်းလှောင်အိမ်မှအချိန်ကြာမြင့်စွာလေ့မသုံးခဲ့ပါဘူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, NE လျော့ကျ အသုံးပြု. လေ့လာမှုများ (Amph မှထိန်းသိမ်းထား locomotor တုံ့ပြန်မှုညွှန်ပြArcher et al ။ , 1986; Geyer et al ။ , 1986; မိုဟာမက် et al ။ , 1986) ။ ဒါကြောင့် NE ဂီယာ၏ထိန်းသိမ်းရေးအတိုင်းအတာနှင့် / သို့မဟုတ် cortical လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုပြောင်းလဲ၏ရွေးချယ်မှုပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်းရှုပ်ထွေးသက်ရောက်မှုမြှင့်တင်ရန်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဒါဟာ DA သို့မဟုတ် NE တစ်သျှူးဖြစ်စေထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ, တစ်သျှူး DA အဆင့်ဆင့် (only90%) တွင်သာအားနည်းခြင်း, သိသိသာသာလျှော့ချရေးထုတ်လုပ်အကြီးအကျယ်ပေမယ့်ရွေးချယ် prefrontal NE လျော့နည်းသွား (> 7%) သွေးဆောင်ဖို့ကျနော်တို့ကမူလစမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသုံးပြုကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်သည် အဆိုပါ NAc အတွက်အဆင့်ဆင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သိပ္ပံပညာအရအကောင်းဆုံးသောအချက်မှာ၎င်းသည် prefrontal NE ကိုရွေးချယ်သောအာရုံကြောအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောသက်ရောက်မှု၏ပထမဆုံးအစီရင်ခံစာဖြစ်သည်။ NE depletion သည် mpFC ရှိ neurotransmitter တစ်ရှူးအဆင့်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်း dialysate ရှိ Basal extracellular NE တန်ဖိုးများသည် Sham တိရိစ္ဆာန်များနှင့်မတူပါ။ ဤရလဒ်များအရ spad noradrenergic afferents များသည် NE တုန့်ပြန်မှုတုန့်ပြန်ခြင်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသည်ဟုအကြံပြုသည်။Abercrombie နှင့် Zigmond, 1989; Hughes နှင့်စတန်းဖို့ဒ်, 1998) ။ ဒီအစားထိုးတုံ့ပြန်မှုတိုးလာ neurotransmitter ပေါင်းစပ်အပေါ်သို့မဟုတ်အခြားယန္တရားများပေါ်တွင်မူတည်ခြင်းရှိမရှိစေ့စေ့မေးမြန်းပြီးခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျး, NE လျော့ကျဖြစ်နိုင်သည်အစားထိုးတုံ့ပြန်မှု Amph စိန်ခေါ်မှုပြီးနောက် NE ထွက်သွားအတွက်အပိုဆောင်းတိုးခွင့်ပြုတော်မမူကြောင်းညွှန်ပြခြင်း, mpFC အတွက် Amph စိန်ခေါ်မှုဖို့ noradrenergic တုံ့ပြန်မှုဖျက်သိမ်း။
ဤလေ့လာမှု၏ဒုတိယအရေးကြီးသောတွေ့ရှိချက် prefrontal NE-ကုန်ခမ်းကြွက်များ၏ NAc အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် DA လွှတ်ရာသိသိသာသာလျှော့ချရေးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Sham အုပ်စု, စနစ်တကျ Amph ဆေးထိုးပြီးနောက် 350 မိမှာအထွတ်အထိပ်တန်ဖိုးကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သော NAc (~40% အလုပျသတိုး) တွင် DA ထွက်သွားအတွက်ကြီးမားတဲ့နှင့်သိသိသာသာတိုး, ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြောင်းပြန်မရှိသိသိသာသာတိုးအရှင် mpFC အတွင်းနဂိုအတိုင်း noradrenergic ဂီယာဟာ NAc အတွင်း Amph-နှိုးဆွ DA လွှတ်ပေးရန်များအတွက်လိုအပ်သောအခွအေနေဖြစ်ခြင်းမှညွှန်ပြ, NE-ကုန်ခမ်းတိရိစ္ဆာန်များ၏ NAc တှငျတှေ့ခဲ့သညျ။ အလွန်မကြာသေးမီရလဒ်များကို Amph α1b-adrenergic receptors ချို့တဲ့ကြွက်များ၏ NAc (ထဲမှာ extracellular DA တိုးမြှင့်ဖို့ပျက်ကွက်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းAuclair et al ။ , 2002) ဒီမြင်ကွင်းကိုထောက်ခံပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုအရှင် 6-OHDA အဆိုပါ NAc မှ diffused ထွက်အာဏာရ, prefrontal cortical NE ကွယ်ပျောက်သွားစေခြင်းဖြင့်မထိခိုက်သော NAc အတွက်လျှော့ချ DA သို့မဟုတ် NE တစ်ရှူးအဆင့်ဆင့်မှ ascribed မရနိုင်ပါ။
cortical NE ကွဲပြားခြားနားသောယန္တယားကနေတဆင့် NAc အတွင်း Amph-ရာထူးတိုး DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ ပထမဦးစွာက ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) ဖို့ excitatory prefronto-cortical projection ကိုသက်ဝင်ပေလိမ့်မည်။ အမှန်စင်စစ်မကြာသေးမီရလဒ်များကို (Amph-ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက် VTA DA အာရုံခံတစ်ခု NE-မှီခိုစိတ်လှုပ်ရှားထင်ရှားပါပြီရှီ et al ။ , 2000), အရှင် Amph-သွေးဆောင် mesoaccumbens DA လွှတ်ပေးရန်တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ငွေပမာဏချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့စီးဆင်းမှုမှီခိုသောအမြင် supporting (Darracq et al ။ , 1998; ရှီ et al ။ , 2000; Paladini et al ။ , 2001) ။ ဒုတိယအချက်မှာက (လွှတ်ပေးရန်လွယ်ကူချောမွေ့စေမည့် DA အာရုံကြောဆိပ်ကမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး AMPA-kainate NMDA presynaptic receptors လှုံ့ဆော်ကြောင်း cortico-accumbal glutamatergic ပရိုဂျက်ကိုသက်ဝင်စေခြင်းငှါ,Darracq et al ။ , 2001) ။ တတိယအချက်ကြောင့် efferent inhibitory GABAergic အာရုံခံ၏ ionotropic အဲဒီ receptor-mediated activation လွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံဒေသခံ GABAergic အာရုံခံ (ဖွငျ့ DA ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှု၏ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်နှစ်ဆတားစီးကွင်းဆက်တွင်ပါဝင်Darracq et al ။ , 2001) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်ချက်အတွက် Amph-သွေးဆောင် accumbal DA လွှတ်ပေးရေးအပေါ် cortical NE ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုအားလုံးသုံးယန္တယားများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုမှထောက်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် VTA DA အာရုံခံခြင်းငှါ, accumbens အတွင်း NMDA အဲဒီ receptor အားဖြင့် DA လွှတ်ရာပံ့ပိုးကူညီခြင်း, DA ဆဲလ် GABAergic လုပ်သူများတားစီး၏ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုများ NE-mediated excitatory input ကို၏ဖျက်သိမ်းရေးအတွက် psychostimulant သက်ရောက်မှုတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့လျှော့ချဖို့လှူဒါန်းခဲ့ကြစေခြင်းငှါ, အဆိုပါ accumbens အတွင်း DA လွှတ်ပေးရန်ပေါ်မှာ။ : D ၏ activation မှတဆင့် accumbal DA လွှတ်ပေးရန်၏တားစီးဖို့အထောက်အကူရသော, NE လျော့ကျ Amph မှ prefrontal cortical DA တုံ့ပြန်မှုမထိခိုက်ခဲ့ပါကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်သည်1 cortical glutamatergic efferents ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး receptors (Tassin, 1998) ။ : D တစ်အခန်းကဏ္ဍ4 NE ၏ဆိုးကျိုးများအတွက် DA receptors (ဒီအဲဒီ receptor မျိုးကွဲနှင့် Amph ၏သက်ရောက်မှုမှာသူတို့ရဲ့တတ်နိုင်သမျှပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ NE ၏ဆှဖှေဲ့၏အလင်း၌အကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရှိပါတယ်Newman က-Tancredi et al ။ , 1997;Feldpausch et al ။ , 1998).
အတူတူ, mpFC NE ကွယ်ပျောက်သွားစေခြင်းဖြင့်ထိုအထူးထူးအပြားပြားယန္တရားများများ၏နှောင့်အယှက် DA အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတားစီးဖို့ဆုံနိုငျသညျ။ DA အာရုံခံ၏ပိတ်ဆို့သည့်အမြှေးပါး DA Transporter (၏ Amph-သွေးဆောင်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ကိုလျော့ကျစေနိုင်တယ်Darracq et al ။ , 2001), prefrontal cortical NE-ကုန်ခမ်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် Amph-သွေးဆောင် mesoaccumbens DA လွှတ်ရာကို virtual မရှိခြင်း၏ရှင်းပြချက်ကိုပေး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, NE-ကုန်ခမ်းကြွက်တွေမှာ Amph-သွေးဆောင် mesoaccumbens DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်သိသိသာသာလျှော့ချရေးအတွက် psychostimulant ၏အားဖြည့်-ဆုချီးသက်ရောက်မှုများပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုညွှန်းသည်အမူအကျင့် data တွေကိုအားကောင်းလာစေပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်စိတ်ကြွဆေးများကသွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအတွက် mesoaccumbens DA လွှတ်ပေးရန်၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍကိုထောကျပံ့ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချသက်သေအထောက်အထား (ရှိCarr ကများနှင့်ဖြူ, 1986; Olmstead နှင့် Franklin, 1996;Schildein et al ။ , 1998).
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဘို့ငါတို့ရလဒ်များ NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရေးမော်ဂျူမှတဆင့်စိတ်ကြွဆေး၏အားဖြည့်-ဆုချီးသက်ရောက်မှု၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေအတွက် prefrontal NE ဂီယာ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကိုဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
သြဂုတ်လ 2, 2002 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
တည်းဖြတ်မူဒီဇင်ဘာလ 2, 2002 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လက်ခံဒီဇင်ဘာလ 9, 2002 ။
ဤလုပ်ငန်းကိုအဆိုပါ Ministero della Ricerca Scientifica အီး Tecnologica (COFIN 2000-2001) နှင့် Ateneo 60% (1999-2000) ကထောက်ခံခဲ့သည်။
စာပေးစာယူမှတဆင့် dei Marsi 78, 00185 ရောမမြို့, အီတလီ ", La Sapienza" စတီဖာနို Puglisi-Allegra, Dipartimento di Psicologia, Universitàမှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ E-mail ကို:[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက်မူပိုင်ခွင့်© 2003 Society က
အလယ်ပိုင်း noradrenergic အာရုံခံမှတစိတ်တပိုင်းဒဏ်ရာ (1989): တစ်ရှူး norepinephrine အကြောင်းအရာလျှော့ချရေး microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာ extracellular norepinephrine ၏လျှော့ချရေးထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်။ J ကို neuroscience 9: 4062-4067 ။
Archer T က,
Lewander T က,
Ross က SB,
(1986) ဗဟို noradrenaline လျော့ကျကြွက်များတွင်ဃ-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် hyperactivity ၏ရှုထောင့် antagonizes ။ Psychopharmacology 88: 141-146 ။
Cotecchia S က,
Glowinski J ကို,
(2002) D-ဖက်တမင်းဆေးပြားα1b-adrenergic receptors ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာ extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ဖို့ပျက်ကွက်: အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့် nonfunctional dopamine လွှတ်ပေးရန်အကြားဆက်ဆံရေးဟာ။ J ကို neuroscience 22: 9150-9154 ။
Trovero က F,
prefronto-cortical α-1994-adrenergic receptors ၏ (1) ပိတ်ဆို့ subcortical ဃ-စိတ်ကြွဆေးဆေးထိုးခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် locomotor hyperactivity ကာကွယ်ပေးသည်။ J ကို neuroscience 6: 293-298 ။
Bubser M က,
Schmidt က WJ
ကြွက် prefrontal cortex locomotor လှုပ်ရှားမှုတိုးပွါး၏ (1990) 6-Hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်, နှောင့်နှေး Alternative အလုပ်များကိုဝယ်ယူချို့ယွင်းပေမယ့် radial ဝင်္အတွက်ကို un-Interrupt တာဝန်များကိုမထိခိုက်ပါဘူး။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 37: 157-168 ။
(1993), အ basolateral amygdala ၏ excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏သက်ရောက်မှု Differential ventral subiculum နှင့် D-စိတ်ကြွဆေး၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens တာဟာအားဖြင့် potentiated conditional အားဖြည့်ခြင်းနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတုံ့ပြန်အပေါ် prefrontal cortex medial ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 55: 167-183 ။
Puglisi-Allegra S က,
Genua ကို C,
ကားရှိမုနျ H ကို,
နေရာအသစ်အေးစက်ယန္တရားအားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ်စိတ်ကြွဆေး၏ (1996) ဆေးသောက်ရန်-မှီခိုဆန္ဒရှိနှင့်အကြိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology 125: 92-96 ။
Orsini ကို C,
(2000) ပယ်ဖျက်ရန်နှင့်အကျဉ်းအတွေ့အကြုံကိုပြီးနောက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက် strain ခြားနားချက်များမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်။ သိပ္ပံ 289: 463-465 ။
Carr က GD,
(1986) amphetamine ရဲ့ဆုနှင့် aversive သက်ရောက်မှု၏ခန္ဓာဗေဒ dissociation: တစ် intracranial microinjection လေ့လာမှု။ Psychopharmacology 89: 340-346 ။
Carter က CJ,
(1980) အပြုအမူနှင့်ကြွက်များ၏ medial prefrontal cortex အတွင်း dopamine နဲ့ noradrenaline ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ထဲကဓာတုပစ်စညျးဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res 192: 163-176 ။
Puglisi-Allegra S က
မှတ်ဉာဏ်မော်ဂျူ၏ (1996) Psychopharmacology: neurotransmitters နှင့်ဟော်မုန်းအကြားမျိုးစုံအပြန်အလှန်အဘို့သက်သေသာဓက။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 77: 1-21 ။
Collins P ကို,
Roberts သည် AC အ,
Dias R ကို,
nonhuman မျောက်ဝံများများအတွက်ဝတ္ထု Spatial Self-အမိန့်အစီအစဉ်လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် (1998) ဇွဲနှင့်မဟာဗျူဟာ။ excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့် prefrontal cortex ၏ dopamine ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကိုသိမြင် neuroscience 10: 332-354 ။
CREB စည်းမျဉ်းများနှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine နဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ် function ကို၏ presynaptic အမှတ်အသားများအပေါ်ကြွက် prefrontal cortex ၏ excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ (1999) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ EUR J ကို neuroscience 11: 1265-1274 ။
Darracq L ကို,
D-စိတ်ကြွဆေး၏ locomotor ကိုသက်ဝင်ဆိုးကျိုးများအတွက် noradrenaline-dopamine နားချင်းဆက်မှီ၏ (1998) အရေးပါမှု။ J ကို neuroscience 18: 2729-2739 ။
Drouin ကို C,
metabotropic ၏ (2001) စိတ်ကြွဆေးသော်လည်းမ ionotropic glutamatergic receptors နျူကလီးယပ်အတွက် accumbens အလုပ်လုပ်တဲ့ dopamine ၏ D-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်လွှတ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ neuroscience 103: 395-403 ။
(1995) လှုံ့ဆျောမှုအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍ၏ရှုထောင့်ကနေမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပြုမှ 38: 95-137 ။
(1988) Alpha 1- နှင့် alpha 2-adrenoreceptor ရန် differential locomotor ကသွေးဆောင်ကျပုံစံအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုး dကြွက်များတွင် -amphetamine နှင့် apomorphine ။ Psychopharmacology 96: 521-527 ။
D-စိတ်ကြွဆေး, ကိုကင်းများနှင့် GBR 2002 ၏စူးရှသောနှင့်ထိခိုက် locomotor ဆိုးကျိုးများအတွက် alpha-1b-adrenergic receptors ၏ (12783a) ဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍ: preexposure အခြေအနေများနှင့် pharmacological ဝိသေသလက္ခဏာများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ synapses 43: 51-61 ။
(2002b) α-1b-Adrenergic receptors locomotor နှင့် psychostimulants နှင့် opiates ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုထိန်းချုပ်။ J ကို neuroscience 22: 2873-2884 ။
(1998) စိတ်ကြွဆေးနှင့်ပူးတှဲထဲကဓာတုပစ်စညျးမြားနှငျ့မော်လီကျူးလိုက်လျောညီထွေမှအမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်း induction အတွက် dopamine D4 အဲဒီ receptor ၏အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို Pharmacol Exp Ther 286: 497-508 ။
(1998) stereotaxic သြဒီနိတ်အတွက် mouse ကိုဦးနှောက်။ (Academic, San Diego မှ) ။
ဦးနှောက် norepinephrine ၏ xylamine-သွေးဆောင်ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ (1986) အပြုအမူသက်ရောက်မှု: စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူအပြန်အလှန်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 21: 55-64 ။
Gibbs M က,
နွေရာသီ R ကို
မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးအတွက် adrenoceptor Subtype ၏ (2002) အခန်းက္ပ။ prog Neurobiol 67: 345-391 ။
Packard တို့ MG
(2002) က amygdala တစ်ခုစိတ်ကြွဆေး conditional ရာအရပျ preference ကိုများအတွက်မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီး mediates ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 129: 93-100 ။
(1998) DSP-4 အားဖြင့်သွေးဆောင်တစ်ဦးကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း noradrenergic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကြွက်တိုကျရိုကျ cortex အတွက် extracellularnoradrenaline အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွါး: Vivo အတွက် microdialysis လေ့လာမှု။ Psychopharmacology 36: 299-303 ။
Kobayashi K သည်,
နို Y ကို,
Matsushita N ကို,
Nishii K သည်,
Sawada H ကို,
Nagatsu T က,
Fukabori R ကို,
Yasoshima Y ကို,
Miura M က,
Kano M က,
Mamiya T က,
Miyamoto Y ကို,
Nabeshima T က
တစ်ဦး mutation tyrosine hydroxylase ဗီဇအဘို့ကြွက် heterozygous အတွက်လျှော့ noradrenaline ဇီဝြဖစ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ (2000) ကြိုးနှံ neuropsychological လိုငွေပြမှု။ J ကို neuroscience 20: 2418-2426 ။
စွဲလမ်း၏ (1998) အာရုံကြောသိပ္ပံ။ အာရုံခံဆဲလျ 21: 467-476 ။
extracellular dopamine, serotonin, နှင့် norepinephrine အပေါ် methylphenidate ၏ (1997) အကျိုးသက်ရောက်မှု: စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ J ကို Neurochem 68: 2032-2037 ။
တစ်ဦး positron-ထုတ်လွှတ် tomography rCBF လေ့လာမှု: (1996) Dextroamphetamine "အာရုံကြောကွန်ရက်တိကျတဲ့" ဇီဝကမ္မအချက်ပြမှုများကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို neuroscience 16: 4816-4822 ။
Danysz W က,
Archer T က
(1986) ဗဟို noradrenaline လျော့ကျစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် locomotor အပြုအမူ attenuates ။ neuroscience လက်တ 64: 139-144 ။
Newman က-Tancredi တစ်ဦးက,
Audinot-Bouchez V ကို,
(1997) Noradrenaline နှင့် adrenaline dopamine D4 receptors မှာမြင့်မားတဲ့ဆှဖှေဲ့ agonists ဖြစ်ကြသည်။ EUR J ကို Pharmacol 319: 379-383 ။
(1996) မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်စိတ်ကြွဆေးများကသွေးဆောင်အခြေအနေများကိုရာအရပျ preference ကိုအပေါ် ventral striatal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏သက်ရောက်မှု Differential ။ neuroscience 71: 701-708 ။
Fiorillo CD ကို,
Morikawa H ကို,
(2001) ဖက်တမင်းဆေးပြား dopamine အာရုံခံအတွက်ရွေးချယ်လုပ်ကွက် inhibitory အချိုမှုဂီယာ။ နတ် neuroscience 4: 275-280 ။
Fuh သည် SM
(1996) ကိုဒေသခံတွေ ventral tegmental ဧရိယာသို့စိတ်ကြွဆေး၏လျှောက်လွှာ noradrenergic neurotransmission မှတဆင့်နျူကလိယ accumbens နှင့် medial prefrontal cortex အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို Pharmacol Exp Ther 278: 725-731 ။
(1995) သွေးကြောသွင်းကင်း, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်စိတ်ကြွဆေးဦးစားသည့်ကြွက်နျူကလိယ accumbens ၏ "အဓိက" နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကအား "shell ကို" တွင် extracellular dopamine တိုးမြှင့်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 92: 12304-12308 ။
Cabib S က
dopamine ၏ (1997) Psychopharmacology: ကြွက်၏ inbred မျိုးကွဲအတွက်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများ၏ပံ့ပိုးမှုများ။ prog Neurobiol 51: 637-661 ။
(1999) မူးယစ်ဆေးစွဲ: DAB အလေ့အထများတက်ထည့်ပါ။ သဘာဝ 398: 567-570 ။
(2001) အခွင့်အရေး-sensitive နှင့်စွဲလမ်း။ စှဲမွဲမှု 96: 103-114 ။
ဗန် Gelderen P ကို,
အတွက် Vivo 2000H-Mrs အချက်ပြမှုများပေါ်တွင်ကြွက် medial prefrontal cortex အတွက် excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ (1) ဒေသခံများနှင့်မြစ်အောက်ပိုင်းဆိုးကျိုးများ။ Neuropsychopharmacology 22: 430-439 ။
(2001) ဖက်တမင်းဆေးပြား-type အမျိုးအစားဗဟိုအာရုံကြောစနစ်စိတ်ကြွဆေးပိုပြီးအစွမ်းထက်သူတို့ dopamine နှင့် serotonin လွှတ်ပေးရန်ထက် norepinephrine လွှတ်လိုက်ပါ။ synapses 39: 32-41 ။
Schildein S က,
Agmo S က,
conditional ရာအရပျ preference ကိုများနှင့်အမူအကျင့်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှု: (1998) ပစ္စည်းဥစ္စာ P ကို, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်စိတ်ကြွဆေးများထိုး Intraaccumbens ။ ဦးနှောက် Res 790: 185-194 ။
Zhang က XX,
dopamine နဲ့ nondopamine receptors ကကမကထပြုခဲ့ dopamine အာရုံခံအပေါ်ဃ-စိတ်ကြွဆေး၏ (2000) Dual-ဆိုးကျိုးများ။ J ကို neuroscience 20: 3504-3511 ။
(1985) Prazosin: ကြွက်များတွင် psychomotor-လှုံ့ဆော်တွေကိုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှု။ EUR J ကို Pharmacol 116: 221-228 ။
Buma MO ကို,
(2001) က EthoVision ဗီဒီယိုကိုခြေရာခံသည့်စနစ်: Transgene ကြွက်များ၏အမူအကျင့် phenotyping များအတွက်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ Physiol ပြုမူနေ 73: 731-744 ။
အဆိုပါ prefrontal cortex အတွက် (1998) Norepinephrine-dopamine interaction ကနှင့် ventral tegmental ဧရိယာ: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများဆက်စပ်မှု။ Adv Pharmacol 42: 712-716 ။
(1998) အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကိုပါရာဒိုင်းနှင့်အတူဆုလာဘ်တိုင်းတာခြင်း: မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ, မကြာသေးမီတိုးတက်မှုနှင့်အသစ်ကိစ္စရပ်များကိုတစ်ဦးပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ်။ prog Neurobiol 56: 613-672 ။
(1998a) ကိုကြွက်များ၏ပြတ် quinolinic acid ကိုတွေ့ရှိရပါသည် prelimbic medial prefrontal cortex cocaine- နှင့် MK-801- ထိခိုက်စေပေမယ့်အရပျကို preference ကိုအေးစက်ပါရာဒိုင်းနှင့်အတူတိုင်းတာအဖြစ် morphine- နှင့်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ဆုလာဘ်များနှင့် psychomotor activation မဟုတ်ပါဘူး။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 97: 115-127 ။
မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကိုပေါ်ကြွက် infralimbic medial prefrontal cortex ၏ discrete quinolinic acid ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ (1998b) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပြုမူနေ Pharmacol9[ပျော့ပျောင်း 1] S87 ။
Ventura R ကို,
စိတ်ဖိစီးမှုမှ (2001) အတိုက်အခံ genotype-မှီခို mesocorticolimbic dopamine တုံ့ပြန်မှု။ neuroscience 104: 627-631 ။
Vezina P ကို
ကြွက်များတွင်တစ်ဦးအတွက် Vivo microdialysis လေ့လာမှု: အ ventral tegmental ဧရိယာသို့ထိုးသွင်း (1993) ဖက်တမင်းဆေးပြားအတွက်နျူကလိယစနစ်တကျစိတ်ကြွဆေးမှ dopaminergic တုံ့ပြန်မှု accumbens sensitizes ။ ဦးနှောက် Res 605: 332-337 ။
(2000) စွဲလမ်းမှု, မလှူခြင်းနှင့် drive ကိုတစ်ဦးရောဂါ: အ orbitrofrontal cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Cereb Cortex 10: 318-325 ။
ကိုကင်းနှင့်အအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး (1992) Neurochemical Correlate ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 654: 220-241 ။
Enrico P ကို,
Feimann J ကို,
(1998) mesocortical dopamine အာရုံခံ၏ဆေးဝါးဗေဒ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာနှင့်ကြွက်ဦးနှောက်၏ prefrontal cortex အတွက်တစ်ဦးက Dual-စုံစမ်းစစ်ဆေး microdialysis လေ့လာမှု။ J ကို Pharmacol Exp Ther 285: 143-154 ။
Castaneda E ကို
(1992) forebrain အဆောက်အဦများအမူအကျင့်စကားရပ်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်သလား? စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြုအမူကနေသက်သေအထောက်အထား, microdialysis နှင့် medial တိုကျရိုကျ cortex ပျက်စီးကြွက်များတွင်တွေ့ရှိရပါသည်-accumbens caudate ။ ဦးနှောက် Res 576: 1-11 ။
(1989) ဦးနှောက် dopamine နဲ့ဆုလာဘ်။ Annu ဗြာ Psychol 40: 194-225 ။
Xu က F,
Miller က GW,
အဆိုပါ norepinephrine Transporter ချို့တဲ့ (2000) ကြွက်တွေ psychostimulants မှ supersensitive ဖြစ်ကြသည်။ နတ် neuroscience 3: 465-471 ။
Postnatal ဆန္ဒရှိအတွေ့အကြုံသဘာဝဆုလာဘ်မှအာရုံချို့ယွင်းခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်ဘဝအတွက်အပျက်သဘောဆောင်သောအဖွဲ့မှဖြစ်ပေါ်နိုင်တိုးတက်စေနိုင်ခြင်း ဦးနှောက် Cortex, 1 ဇူလိုင်လ 2013, 23 (7): 1606-1617
ကင်း-ဆက်စပ်နေတဲ့မှတ်ဥာဏ်၏ retrieval နှင့် Reconsolidation ၏ Neurobiological Dissociation အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 16 ဇန်နဝါရီလ 2013, 33 (3): 1271-1281
နျူကလိယ dopamine တစ် monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်လူမှုရေးစဘွန်း၏စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ချို့ယွင်း mediates accumbens PNAS, 19 ဇန်နဝါရီလ 2010, 107 (3): 1217-1222
တစ်ဦး Methylphenidate-resistant Dopamine Transporter နှင့်အတူကြွက်တွေ Knockin အပေါ် Methylphenidate ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း, 1 နိုဝင်ဘာလ 2008, 327 (2) ၏ဂျာနယ်: 554-560
အဆိုပါ Medial Prefrontal Cortex ဟာဆနျ့ကငျြသူ Norepinephrine ၏သွဇာနှင့် Dopamine မှတဆင့်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျဖို့ Accumbens Dopamine တုံ့ပြန်မှုဆုံးဖြတ် ဦးနှောက် Cortex, 1 ဒီဇင်ဘာလ 2007, 17 (12): 2796-2804
မူးယစ်ဆေးဝါး၏ကင်း-သွေးဆောင် Reinstatement အတွက် Noradrenergic ယန္တရားများ Squirrel မျောက်များအတွက်ရှာ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း, 1 သြဂုတ်လ 2007, 322 (2) ၏ဂျာနယ်: 894-902
အဆိုပါ Ventral Tegmental ဧရိယာအတွင်းရှိ Prefrontal Cortex နှင့် Dopamine အာရုံခံအကြား functional စုံတွဲ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 16 မေလ 2007, 27 (20): 5414-5421
Prefrontal / accumbal catecholamines system ကို reward- နှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်-related နှစ်ဦးစလုံးလှုံ့ဆော်မှုဖို့စိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုဆုံးဖြတ်သည် PNAS, 20 မတ်လ 2007, 104 (12): 5181-5186
noradrenergic နှင့် serotonergic အာရုံခံအကြားတစ်ဦး uncoupling ထံမှစိတ်ကြွဆေးရလဒ်များကိုမှအမူအကျင့်ာင်း PNAS,9မေလ 2006, 103 (19): 7476-7481
Prefrontal cortical Norepinephrine ဖြန့်ချိခြင်း, နျူကလိယ Accumbens အတွက် Reinstatement နှင့် Dopamine ဖြန့်ချိမော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ဆုကြေးများအတွက်အရေးပါ Is ဦးနှောက် Cortex, 1 ဒီဇင်ဘာလ 2005, 15 (12): 1877-1886
Classical ကိုက် Appetitive မှဆက်ဆံရေးအတွက် Prefrontal Cortex အတွက် Noradrenaline နှင့် Dopamine Efflux အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 10 မတ်လ 2004, 24 (10): 2475-2480
နျူကလိယ Accumbens Medial Shell နှင့် Core အကြားဖက်တမင်းဆေးပြားဆုကြေးနှင့် Locomotor စိတ်ကြွဆေး၏အသားအရောင်ခွဲခြား အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 16 ဇူလိုင်လ 2003, 23 (15): 6295-6303